तपाईंको मनको गुप्त पावर
वयस्क शिक्षाका लागि वयस्क विद्यार्थीहरूको लागि सुझाव
विचारको शक्तिले तपाईंको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस्
तपाईंको दिमाग एक धेरै शक्तिशाली कुरा हो, र हामीमध्ये अधिकांशले यो प्रदानको लागि लिन्छन्। हामी विश्वास गर्छौं कि हामी कुन कुराको नियन्त्रणमा छैनौं किनकि हाम्रो विचारहरू दिनभरि लामो उडान र बाहिर देखिन्छ। तर तपाईं आफ्नो विचार नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, र तपाईं के बारे सोच्नु भएको हो। अनि त्यो सानो कर्नेल दिमागको गुप्त शक्ति हो।
यो वास्तवमा सबै पछि एक गुप्त छैन। शक्ति सहित हरेक व्यक्तिको लागि उपलब्ध छ।
र यो निःशुल्क छ।
"गोप्य" हो जुन तपाईं के सोच्नु हुन्छ। तपाईं के सोच्नु भएको हो। तपाईं जीवन चाहानुहुन्छ , सरल विचारहरू विचार गरेर।
"अजीब गुप्त" मा अर्ल नाइटिंगल
1956 मा, अर्ल नाइटिङले "द अजीब गोप्य" लेखे जुन मानिसहरूलाई दिमागको शक्ति, सोचको शक्ति सिकाउन प्रयास गर्दछ। उनले भने, "तपाईं सबै दिनको बारेमा के सोच्नुहुन्छ।"
नाइटिंगलको प्रेरणा नेपोलियन हिलको किताबबाट आएको थियो, "1 937 मा" सोच र विकास रिच "।
75 वर्षसम्म (र सम्भवतः लामो समय सम्म), यो सरल "गोप्य" संसार भरका वयस्कों लाई सिकाइएको छ। कम्तिमा, ज्ञान हामीलाई उपलब्ध छ।
मनको शक्ति कसरी तपाईंको जीवन अझ राम्रो बनाउन सक्छ
हामी आदत प्राणी छौं। हामी हाम्रो दिमागहरूमा हाम्रो आमाबाबु, हाम्रा छिमेकीहरू, हाम्रा शहरहरू र संसारका भागहरू जुन हामीले आउनेछौं, को तस्वीर पछ्याउँदछौं। राम्रो वा खराबको लागी।
तर हामीले छैन। हामी प्रत्येकसँग आफ्नै आफ्नै दिमाग छ, जीवनलाई कल्पना गर्ने तरिकालाई हामी यो चाहने क्षमतामा सक्षम छौं। हामी हाँ भन्न सक्छौं वा लाखौं छनौटहरूमा हामी प्रत्येक हरेक दिनको सामना गर्यौं। कहिलेकाहीँ यो राम्रो भन्न को लागी राम्रो छ, वा हामी सबै केहि गरेनौं। तर सबै भन्दा सफल व्यक्तिहरू जिन्दगीलाई समग्र जीवनमा भन्नुहुन्छ।
तिनीहरू सम्भावनाहरूका लागि खुला छन्। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा परिवर्तनहरू गर्ने शक्ति छन्। तिनीहरू नयाँ कुराहरू प्रयास गर्न वा असफल हुन डराउँदैनन्।
वास्तवमा, धेरै भन्दा सफल कम्पनीहरूले मानिसहरूलाई इनाम दिन्छन् जुन साहसहरू नयाँ चीजहरू खोज्न समेत भोग्छन्, भले पनि तिनीहरू असफल भएन किनभने हामी जुन असफल भए पनि अत्यन्तै सफल कुराहरूमा परिणत हुन्छ। तपाईले पोष्ट-इन नोटहरू शुरुमा गल्ती गरेका थिए?
तपाईंको मनको शक्ति कसरी प्रयोग गर्ने
आफ्नो जीवन कल्पना गर्ने तरिकालाई जसो तपाईं यो चाहनुहुन्छ। तपाईंको दिमागमा एक तस्वीर सिर्जना गर्नुहोस् र त्यस दिनको बारेमा सोच्दै दृढतापूर्वक दिनभरि। यसमा विश्वास गर्नुहोस्।
तपाईंलाई कसैलाई भन्नु छैन। तपाईंको आफ्नै शान्त विश्वास छ कि तपाईं आफ्नो मनमा तस्वीर बनाउन सक्नुहुनेछ।
तपाइँ आफ्नो तस्वीरको साथमा विभिन्न छनौटहरू बनाउन सुरु गर्नुहुनेछ। तपाईंले सही दिशामा साना कदमहरू लिनुहुनेछ।
तपाईं पनि बाधाहरू सामना गर्नुहुनेछ। यी बाधाहरू तपाईंलाई रोक्न नदिनुहोस्। यदि तपाईं जीवनको आफ्नो तस्विर आफ्नो मनमा स्थिर चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अन्ततः त्यो जीवन सिर्जना गर्नुहुनेछ।
तपाईलाई हराउनु भएको छ? आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र अहिले सुरु गर्नुहोस्।
तपाईं सोच्नु हुनेछ कि तपाई के सोच्नुहुन्छ।
दृश्य लर्निंग स्टाइलसँग विद्यार्थीहरूको लागि विचारहरू सिकाउनुहोस्
कसरी सिक्न सक्ने अनुबंध लेख्नुहोस् र तपाईंको लक्ष्यहरू सच्याउनुहोस्
8 वयस्क वयस्क विद्यार्थीहरु एक्टिट र एसएटी टेस्ट प्रिपी बारे जान्न आवश्यक छ
एक वयस्क विद्यार्थीको रूपमा सफलताको लागि 10 रहस्य
तपाईंको अनलाइन कोर्स शुरु गर्नु अघि तपाईंले गर्नु पर्छ
द्वन्द्व समाधान गर्न एक चरण-दर-चरण गाइड
8 तपाईंको बालबालिकाको अध्ययन अध्ययन गर्ने तरिका
वयस्क विद्यार्थीहरूको लागि प्रतियोगिता जितेर स्कूलको लागि तिर्नुहोस्
ग्याँस ग्याँसले मद्दतको लागि फाउण्डेशनको फाउन्डेसन निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ
सय वर्षका युद्ध: युद्धको युद्ध
ग्लास पुनर्चक्रणको फाइदाहरू
फोटो टुर ओफ प्रो प्रो फर्वार्ड ग्रिप्स
सिभिल युद्ध राज्य द्वारा युद्ध
Cómo renovar el pasaporte americano o pasaporte de la carto
हस्तिहरू जसले स्पेनिश भाषा बोल्ने दोस्रो भाषाको रूपमा बोल्छन्
अर्नोल्ड पामर: 'राजा' जीवनी
सर्वश्रेष्ठ 19औं सताब्दी नोभेल्स को एक पढाई सूची
आवश्यक थ्र्याश मेटल एल्बमहरू
रातो अल्गा (रोडोफिटा)
"हैरी पोटर र जादूगरको स्टोन" उद्धरण
आईआईवी लीगको लागि GPA, SAT, र ACT प्रवेश डेटा
फ्रैंक लयड राइट को बारे मा शीर्ष 11 पुस्तकहरु
कलेज विद्यार्थीहरुको लागि मजा मिति विचार
के मैले डाक्टर डिग्री कमाउनु पर्छ?
विश्वयुद्ध म: एक स्टेलमेट इन्सेज
जेट स्ट्रीम: यो कस्तो छ र यो हाम्रो मौसममा कस्तो प्रभाव पार्छ